IsiHumidifier, Isicoci soMoya, Iketile yoMbane-Kennede
Sinceda ihlabathi elikhula ukususela ngo-2000
Inkxaso ye-imeyile export@kennede.com
Fowunela iNkxaso 86 135 0028 7280
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yophuhliso, i-KENNEDE ineenzuzo ezicacileyo zokukhuphisana.
I-KENNEDE ineenzuzo zobugcisa ezinamandla kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwama-860, kuquka namalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwe-100 abhaliswe kumazwe angaphandle.
Iqela lezentengiso laseKENNEDE linabathengisi abangaphezu kwama-40. Bonke bagxininisa kumgaqo wophuhliso othi "YINTONI YOKUTHENGISA & INDLELA YOKUTHENGISA", yenza izinto ezintsha kunye nokubonelela ngeenkonzo zabathengi ezibalaseleyo nezinyanisekileyo.
Kwixesha elizayo, i-KENNEDE iya kuhlala ijonge phambili ekusekeni ukuthembana kunye nobudlelwane bentsebenziswano bexesha elide kunye nabathengi behlabathi lonke, kwaye iqhubeke izabalazela ukuba ngoyena umenzi wobuchule nokhuphisanayo.
HEPA Air Isicoci soMoya isicoci sobuntu
Ifeni etshajwayo evela eKennede
Umlandeli weenyawo, iiFani eziOscillating, iFani yoMbane, iA...
KENNEDE 360 LED Camping Lantern ukusetyenziswa ngaphandle
Ifeni encinci enebhetri evela eKennede
Umgangatho sisiseko sokusinda kunye nophuhliso lweshishini, isimboli yokulawula umgangatho: ukwaneliseka kwabathengi abaphezulu, izinga lexabiso eliphantsi. Kwixesha elizayo, inkampani iya kuphuhlisa uluhlu lwamanyathelo okuphucula okusekwe kwezi njongo zimbini, ukuphucula ulwazi lomgangatho kunye nezakhono zobugcisa kubo bonke abasebenzi, ukubonelela ngenkxaso eqinileyo yokuphucula umgangatho wenkampani, kunye nokudala ikamva eliphumelelayo.
Umzi-mveliso wethu ukhule waba yiNkulumbuso ye-ISO 9001 kunye nomvelisi oqinisekisiweyo we-BSCI woMgangatho oPhezulu, oSebenzayo.
I-Kennede ihlala kwisiXeko saseJiangmen, kwiphondo laseGuangdong, indawo egubungela indawo eyi-220000 square metres,. saseka ukusukela ngo-2000, umzi-mveliso wobuchwephesha wezinto eziTshajwayo kwakhona kunye nezinto zombane zasekhaya. OEM kunye ODM bamkelekile.
I-Mist Humidifier yokusetyenziswa kwasekhaya kunye nobuqu
Isibane seDesika ye-LED enokukhanya kwasebusuku ukuze kusetyenziswe ekhaya
I-Camping Lantern iHlaziywa kwakhona ngenxa yoNgxamiseko
Iketile yoMbane yentsimbi epholileyo yokuTouch-Touch
Iketile yoMbane yoLawulo loBubushushu beTea yeglasi K...
Ukuba ufuna isisombululo soshishino ... Sifumaneka kuwe
Sinikezela ngezisombululo ezintsha zenkqubela phambili ezinzileyo. Iqela lethu lobuchwephesha lisebenzela ukwandisa imveliso kunye nokusebenza kweendleko kwiimarike
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yophuhliso, i-KENNEDE ineenzuzo zobugcisa ezinamandla kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwama-860, kubandakanywa amalungelo awodwa abenzi bamachiza angaphezu kwe-100 abhaliswe kumazwe angaphandle.
Ukukhutshwa kweMveliso eNtsha-Okutshajekayo kwakhona ...
Ukuchuma kweshishini le-LED laseTshayina | gold Wr...
Kwi | uphumelele igolide iWright "umgangatho uwonke...